#imld14: Miaina sy iainana ny teny malagasy | mandimby maharo
#imld14: Miaina sy iainana ny teny malagasy	Posted on 21 February 2014 by Mandimby Maharo	Safidy manokana, ary finiavana no hanoratako amin’ny teny malagasy eto amin’ity takela blaogy ity. Tsy misy fanazavana manokana momba oo safidy io hafatsy ny hoe: ny teny malagasy no manavanana ahy kokoa satria io no teny nanabeazan’ny reniko ahy.
Koa amin’iity 201 fenroary 2014 ity, andro iraisam-pirenena ho an’teny ibeazana, na koa hoe tenin-dreny izao dia maneho fankasitrahana manokana ny Ministeran’ny Kolotsaina sy ny Vakoka, ny Akademiam-pirenena malagasy ary ireo izay rehetra manentana ho amin’ny fankalazana ity andro ity ny tenako. Lohahevitra iarahana mibanjina amin’ityy taona 2014 ity moa ny hoe “Ny Taniko, Ny Tantarako, ny Teniko”. Famelabelaran-kevitra momba ireo singa telo ireo moa no hoentin’ny Akademia malagasy ho antsika anio tontolo. Ny fampiharana sy ny fanehoana izany kosa no ho ataon’ny Minisitera, amin’ny alalan’ny Tranom-bokim-pirenena hanamarihana ity andro ity. Ny teny malagasy izay ho aseho amin’ny endriny samihafa toy ny literatiora, ny hira, ny fampiasana azy manaraka ny teknolojian’ny fifandraisana, ny fivoharany eo amin’ireo tanora mpiangaly ny Slam sy ny maro tsy ho voatanisa.
Faniriana ny hanohizana hatrany ny fanabeazam-boho ny teny malagasy mba tsy hahafaty azy na dia eo aza ny fivoarana maro amin’izao vaninandro izao. Ezaka hita efa misongadina izany raha mahita ireo takela blaogy, pejy aterneto, sy ireo soratra any anaty tambazotra saosialy mampiasa ny teny malagasy. Ezaka iarahana manao sy hifanohanana hatrany.
Tags: imld14, Madagasikara, MalagasyCategories: Uncategorized